Full Coverage ဖြစ်ပြီး ရေဓာတ်အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် Flawless Lumière Radiance-Perfecting Foundation! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Full Coverage ဖြစ်ပြီး ရေဓာတ်အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် Flawless Lumière Radiance-Perfecting Foundation!
Full Coverage ဖြစ်ပြီး ရေဓာတ်အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးနိုင်မယ့် Flawless Lumière Radiance-Perfecting Foundation!
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ ဒီနေ့မှာတော့ ရေဓာတ်ကို 15 နာရီကြာ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး Full Coverage ပေးတဲ့ Flawless Lumière Radiance-Perfecting Foundation လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Foundation ဟာ Weightless Liquid Foundation Type အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ စိုပြေတဲ့ အသားအရေပုံစံမျိုးဖြစ်စေမှာပါ။
ဗီတာမင် စီ ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေကို တောက်ပကြည်လင်လာစေပါတယ်။ မိတ်ကပ်မသုံးထားရင်လည်း ကြည်လင်တဲ့အသားအရေကို ဆက်လက်ဖန်တီးပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အသားအရောင် ညီလာပြီး အမဲစက်လေးတွေသက်သာလာတာကို နှစ်ပတ်အတွင်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။ Silver Ear Mushroom Extract ဟာ လိုအပ်တဲ့ရေဓာတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အပြင် ချောမွတ်တဲ့အသားအရေကို တခဏချင်းဖန်တီးပေးပါတယ်။ ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လည်း အရေးအကြောင်းများ တဖြည်းဖြည်းမှိန်လာစေပါတယ်။
Flexible Polymers ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် လိမ်းလိုက်တဲ့အခါ အသားအရေထဲ ပျော်ဝင်သွားစေပြီး တသားတည်းဖြစ်စေပါတယ်။ အသားအရေမရွေးအသုံးပြုနိုင်ပြီး ကိုယ့် အသားအရောင်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ Foundation အရောင်များကို ရွေးချယ်နိုင်စေရန်အတွက်လည်း အရောင် ၃၀ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်အသားအရောင်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအရောင်အထိ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုတဲ့အခါ လက်ချောင်းထိပ်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ Sponge များကို အသုံးပြုပြီး လိမ်းခြယ်နိုင်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 48 $ ကျသင့်ပြီး UK Collection တို့နဲ့ ချိတ်ဆက်မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source: www.lauramercier.com